सबै कलाकारलाई धेरै दु ख दिन्थे राजेश हमालले – Gazabkonews
सबै कलाकारलाई धेरै दु ख दिन्थे राजेश हमालले
महानायक राजेश हमालको बिषयमा अहिलेसम्मकै ठुलो प र्दा फास, महानायकको उपमा दिइए पनि ब द मा स थिए राजेश, सबै कलाकारहरुलाई दिन्थे यस्तोसम्मको दु ख, महिलाहरुलाई राजेशले अझै दु ख दि न्थे, महिला सहकर्मीलाई हे प्नु हे प्थे, रा तभ री सुटिगंका क्रममा के गरे त्यो रा त ? रमा थपलियाले खोलीन् राजेशको अहिलेसम्म नखुलेको र हस्य, डिल्ली बजारको एक होटलमा किन यस्तो नराम्रो काम गरे राजेशले ?
ज्योति गुरुङ मर्मस्पर्शी तथा मनछुने शब्द लेख्नमा माहिर गीतकार मानिन्छिन् । लोक र आधुनिक गीतमा दिल छुनेगरी शब्द सिर्जना गर्न अब्बल गीतकार ज्योतिको ‘मुटुको टुक्रा’ गीतको भिडियो बेलायतबाट सार्वजनिक गरिएको छ । ज्योतिको शब्द सिर्जना रहेको गीतमा सुरज लामिछानेको संगीत र एरेन्ज रहेको छ । गीतमा एक प्रवासी आमाले स्वदेशमा भएका आफ्नो दुई सन्तानको सम्झनामा उपहार स्वरुप भिडियो पस्किएकी हुन् ।
गायिका देवी घर्ती मगरले आवाज दिएकी गीतमा स्वयम ज्योतिकै सशक्त अभिनय देख्न सकिन्छ । गीतमा बाल कलाकार काव्या श्रेष्ठका साथमा अंनिश्का थापा, शंकर पाण्डे, सलोनी रन्जितकार र इभा सिंह ठकुरीको अभिनय देख्न सकिन्छ । गीतको भिडियोमा बाध्यात्मक परिस्थितिले विदेशीनुको पीडा र भोगाइ प्रस्तुत गरिएको छ । गीतकार ज्योतिले प्रवासबाट यस कोशेली दर्शकका लागि पस्किन पाउँदा खुशी लागेको बताएकी छन् ।
बेलायतमा रहेर पनि ब्याक टु ब्याक उत्कृष्ट भिडियो निर्माण र ब्यस्त निर्देशकको परिचय बनाएका निर्देशक कुशल श्रेष्ठले सार्वनिक भिडियोलाई निर्देशन गरेका हुन् । जसमा छायांकन, सम्पादन, परिकल्प्ना पनि निर्देशक श्रेष्ठकै रहेको छ ।भिडियोमा नबिन निरौलाको कलरिङ्ग, दीपिका श्रेष्ठको मेकअप रहेको छ । भिडियो गीतकार ज्योतिकै युट्युव च्यानल जेजी क्रियशनबाट बजारमा आएको हो ।